Cali Robo:Mandheera waxa ay qarka u saaran in ay hoostagto xukunka Al Shabaab! | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Cali Robo:Mandheera waxa ay qarka u saaran in ay hoostagto xukunka Al...
Cali Robo:Mandheera waxa ay qarka u saaran in ay hoostagto xukunka Al Shabaab!
Gudoomiyaha Gobolka Mandheera Cali Roba ayaa sheegay in Xoogga Hubaysan ee Al-Shabab ay hada gacanta ku hayaan 50% waqooyi bari Kenya kadib markii ay qabsadeen goobo istiraatiiji ah oo ka tirsan gobolkaasi.
Cali Roba oo maqaal ku daabacay Wargaysa The Standard ee ka soo ka soo baxa Nairobi ayaa yiri “Waxaa loobaahanyahay in wax laga badalo qaabka aan ula dhaqmeyno xaaladan, hadii kale, dhawaan waxaan hoos imaan doonaa xukunka argagixisada. Horeba, Al Shabaab waxa ay ku maamushaa in kabadan 60 boqolkiiba Mandheera”
“Walaalaha reer Kenya, waxaa laygu qasbay inaan si cad uga hadlo xaalada nabadgelyo xumo ee kajirta Woqooyi Bari Kenya, iyo gaar ahaan Degmada Mandheera” ayuu xusay Robo.
“Dhibaato daran oo xagga amniga ah ayaa ka dhex jirta gudaha Gobolka Mandheera, taas oo ay sababtay dhaq dhaqaaq aan cabsida lahayn oo ay ku hayaan argagixisada gudaha gobolka. Xaaladdaani way ka sii xumaaneysay saddexdii bilood ee la soo dhaafay laakiin hadda waxay gaartay heerar aan horay loo arag” ayuu yiri siga oo intaasi raaciyay “Argagixisadu waxa ay xoolo ka aruursanayeen xoolo dhaqatada oo aan ciirsi lahayn iyagoo ku magacaabaya Zakkat” ayuu yiri.
18-kii Diseembar ayuu sheegay in Al Shabaab ay madaxa ka jareen gudoomiye tuulo hoostagta Mandera.
Waxa uu sheegay in Al Shabaab weerareen saldhigyo Boolis iyo xurumaha shirkadaha Isgaarsiinta gobolka Waqooyi Bari.
“Warbixinnada saraakiisha amniga ee lagu dilay iyagoo gudanaya waajibaadkooda ayaa sii kordhaya. Wadooyinka waa weyn ee ka tirsan ismaamulka Mandheera waxaa hada gacanta ku haya dagaalyahanada Al Shabaab oo dhibaateeya dadka safarka ah isla markaana bartilmaameedsada shaqaalaha rayidka ah” ayuu Yiri Cali Robo.
Dowladda Kenya ayuu ku eedeeyay in ay ku fashilantay in ay wax ka qabato amaanka gobolka Waqooyi bari Kenya, taasi ay keentay in ay Al Shabaab maamulaan inta badan gobolka sida uu hadalka u dhigay.
“Dowladdu waxa ay ku fashilantay in ay si buuxda uga difaacdo Waqooyiga Kenya Al Shabaab. Sida ay hada tahay, runta foosha xun ayaa ah in Al Shabaab ay la wareegeen in ka badan 50 boqolkiiba dhulkii Waqooyiga Kenya. Dadweynaha waa in ay hadda u istaagaan oo ay caawiyaan dowladda, si kasta oo ay suurtagal u tahay, si looga takhaluso kooxdan argagixisada ah” ayuu maqaalkiisa ku sheegay.
Cali Roobo oo qiray in Xukumadda Nairobo qarash ku bixisay amaanka Gobolka ayaa sheegay in ay qarka u saaranyihiin ay xirmaan dhamaan goobaha waxbarashada gobolka maadaama macalimiintii ay gobolka uga carareen amaan daro.
Previous articleMusharaxiinta oo beesha Caalamka u gudbiyay talobixin ku saabsan qabashada doorashada
Next articleTababare Caan ah oo diiday Bilad Sharaf uu Madaxweyne Trump siin lahaa !!
Shan kamid ah ragii ugu caansanaa Shabaab ee duqeynta oo kudilay Mareekanka”Yaa kamid ah
Khilaafka Soomaaliya iyo Kenya: Natiijada xaqiiqo raadintii xiisadda Muqdisho iyo Nairobi oo la sugayo
Gudoomiyaha Aqalka Wakiillada Mareeknaka Kumbiyuutar laga xaday miyaa laga iibiyay Ruushka?
Wararkii ugu dambeeyey ee xiisadda Puntland iyo Imaaraadka oo xoogaystay
Maxay warbixinta kooxda QM ka tiri saldhiga Berbera ee Imaaraadka Carabta?
DAAWO:WARAR Deg Deg Xasan Sheekh oo Farmaajo kala kulmay wax oo fileyn iyo Kheyre oo xildhibaano cusub wasiirada kusoo...
Sawirro:Lacagta ku baxday dhismaha Safaarada Soomaaliya ee Washington oo la shaaciyay
Ciidamada NISA Oo Dekedda Muqdisho Ku Qabtay Xubin Al-Shabaab Ka Tirsan Iyo Hub Uu Watay
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Waqti Laqaatay Dhalinyarada Reer Caabudwaaq Fariin Culusna Udiray
Madaxweyne Farmaajo oo ka tacsiyadeeyay geeridii Abaanduulihi hore ee xoogga dalka
SAWIRO: Tuke ‘caaqil ah’ oo ka yaabiyay seeynisyahano…
DEG DEG: Ciidamo hab beeleed u abaabulan oo ciidamada DF kala wareegay gacan ku heynta Hobyo
C/raxmaan C/shakuur Oo Fariin Dhego Hadal Ah Usoo Diray Madaxda Dalka